Last modified August 22, 2018 Page views 3266 Documentation in PDF	Metadata DDI/XML JSON
Place for HIV test: Provincial hospital (public) (Zimbabwe) (W_ATZW2)
ATZW2 indicates whether, in response to an open-ended question, the woman reported a public provincial hospital as a place to be tested for the AIDS virus. This response category is country-specific to Zimbabwe.
ATZW2 is combined with ATZW1 (public central hospital) and ATZW3 (public district/rural hospital) in ATPUBHOS (all public hospitals) for the 2005 Zimbabwe sample.
Additionally, Zimbabwe 2010 separates public district and public rural hospital into two distinct response categories. As a result, ATZW2 is combined with ATZW1, ATZW4 (public district hospital), and ATZW5 (public rural hospital in ATPUBHOS (all public hospitals) for the 2010 Zimbabwe sample. IPUMS-DHS users interested in using ATZW2 are encouraged to review ATPUBHOS for a more comprehensive response category.